HomeEnglandVan Gaal: Wuxuu Ahaa Qaab Ciyaareed Liita
Manchester United tabareheeda Louis van Gaal ayaa canbaareeyey qaab ciyaareedkii kooxdiisa kulankii Xallay ee ay guusha 3-1 ka ah kaga dul talaabsadeen Burnley laakiin diiday in kooxdiisu ilaa baryahanba ahayd mid sidaas isaga daalaa dhacaysay.
United ayaa dib ugu soo noqotay jidkii guusha ciyaartii ay barbar dhaca 1-1 ka ah ku kala baxeen West Ham ee Axadii ina dhaaftay, iyadoo uu laacibka bedelka ku soo gallay ee Chris Smalling laba gool isu daba galliyey ka saddexaadna uu raaciyey Robin van Persie.
Si kastabase ha ahaatee, Van Gaal ayaa ku adkaystay in ciyaartan kooxdiisu ay ka fogeyd heerkeedii wanaagsanaa intii ay 90 ka daqiiqo socdeen oo dhanba, wallow uu meesha ka saaray in qaab ciyaareedka ay soo bandhigtay la odhan karo wuxuu ahaa mid u fiican marka la barbar dhigo kuwii ay soo bandhigaysay ciyaarihii tagay.
Ciyaarta kadib wuxuu ku yidhi saxaafada: “Kuguma waafaqsani qiimayntaada [In United ay intii muddo ahaydba soo daalaa dhacaysay], Waxa kaliya oon ku odhan karaa ciyaartani ma ahayn mid wanaagsan. Waxaanu soo yeelanay ilaa imika 16 ama 17 ciyaarood oo aanu mar kaliya guuldaraysanay sidaas darteed uma malaynayo in ciyaar kastaa aanay ahayn mid ku soo jiidata, manaanaan ciyaarayn kubad weerar ku dhisan sidaas darteed kuguma waafaqsani. Laakiin tan caawa waad ku saxan tahay”
Maxaad Ka Taqaanaa Shanta Laacib Ee Aan Abidkood Qaadan Kaadhka Cas, Mudadii ay Ciyaarayeen Kubada Cagta